Kushaikwa kweNdege Kwotadzisa Vekunze Kushanyira Masvingo?
VaWalter Mzembi, Gurukota rezveKushanyirwa muNyika
Vana muzvinabhizimusi vari munzvimbo dzinoshanyirwa kuMasvingo vanoti kushaikwa kwendenge dzinouyisa vanhu mudunhu mavo zviri kuvhiringa bhizimusi munyaya dzekushanyirwa kwedunhu iri.
Vachitaura pamusangano waitwa neChina muguta reMasvingo, vemabhizimusi vaudza gurukota rezvekushanyirwa munyika, VaWalter Mzembi, kuti vagadzirise nzvimbo dzinomhara ndege kuitira kuti ndege dzinotakura vanhu dziuye kudunhu ravo nevashanyi vekunze vakawanda.
Mashoko aya anotevera kudzikira kwaita mabhizimusi munyaya dzekushanyirwa kwedunhu iri, sezvo vakawanda vari kuti havadi kufamba nemigwagwa yenyika nekuti haina kumira zvakanaka.
Vashanyi vanonzi vanosarudza nzvimbo dzinosvikika nendege vachitora nguva shoma, dzakaita se Victoria Falls, vachisiya dzakaita seMasvingo eGreat Zimbabwe nenzvimbo yemhuka yeGonarezhou kuChiredzi.
VaPhanos Matura, avo vanoita zvemahotera uye vari sachigaro weMasvingo Publicist Association, vanoti vashanyi vaderera nekuti havadi kutora nguva yakareba vachifamba nemumugwagwa.
“Kutaura chokwadi, vaenzi vakaderera, zvikuru vekunze. Tinona kuti vashanyi kazhinji vakafuma pamari asi vane nguva shoma. Mushanyi anoda 4 to 5 hours kubva kuHarare asi ne ndege vanoda 20 minutes saka vanoda ndege. Saka zvatisina ndege vanonoshanya kunzvimbo dzine ndege.” vanodaro VaMatura.
Nyanzvi mune zvekushanya nekushanyirwa, VaFredrick Kasese, vanotiwo mamiriro akaita migwagwa mikuru yemunyika haana kunaka nokudaro vashanyi havadi kufamba nemo vachityira njodzi ndosaka vasiri kuuya kuMasvingo.
“Kufamba nendege kunodzikisa nguva yekufamba, zvinoita nyore kumunhu anoda kuuya ku Great Zimbabwe achidzoka musi uyoyo. Kana munhu achifamba nenzira yedu isati yagadzirwa pane njodzi dziripo, pane njodzi yemhuka, iyo road yacho pachayo haina kunaka, chechitatu nguva yaunotora uchifamba kuti uzondoita zvimwe inorebesa hausozvikwanisi,” vadaro VaKasese.
VaMzembi vaudza vanhu ava kuti hurumende ichavandudza nhandare yendege yeMasvingo pamwe neyeBuffalo Range kuChiredzi kuitira kuti vashanyi vakwanise kuzoona Masvingo e Zimbabwe ane mukurumbira pasi rose, pamwe nemhuka kuGonarezhou ne Save.
Vati kutanga mwedzi unouya hurumende ichadzosa ndege muMasvingo kuti dzitakure vanhu nevashanyi kuti dunhu riwane mari yekunze zvinozoita kuti mabhizimusi asafe.
Mukuru mubazi rezviwanikwa nekuchengetedzwa kazvo muMasvingo, VaLovemeore Mandima, vanoti ndege dzikauyiswa kuMasvingo vashanyi vanowedzera.
“Ndinoona kuti pakauyiswa ndege muno ‘in terms of our number’ yema vistors dzino improvha kunyanya ku key place ye Great Zimbabwe Monuments asi tinemamwe akawanda anoshanyirwa," vadaro VaMandima.
Vamwe vataura vati Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa chimiro chayo panyaya dzematongerwo enyika pamwe nekodzero dzevanhu kuitira kuti iremekedzwe nenyika dzine vanhu vane mari yakawanda vanokwanisa kushanyira Zimbabwe vakasununguka.